सुनको मास्क ! कोरोनाबाट जोगिन लगाउँछन् नेपाली चार लाख बढिको मुल्य पर्ने माक्स «
सुनको मास्क ! कोरोनाबाट जोगिन लगाउँछन् नेपाली चार लाख बढिको मुल्य पर्ने माक्स
प्रकाशित मिति :6July, 2020 12:06 pm
एजेन्सी- कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य भइसकेको छ। बजारमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न मूल्यमा मास्क पाइन्छ। सुरूसुरूमा त धेरै ठाउँमा मास्कको अभाव पनि भएको थियो।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न भारतमा एकजनाले भने सुनको मास्क लगाउन थालेका छन्। पुनेका शंकर कुरहडे नामका ती व्यापारीले चार हजार अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने मास्क लगाउन थालेका हुन्। ६० ग्राम सुनको उक्त मास्क बनाउन शिल्पकारलाई आठ दिन लागेको थियो।
४९ वर्षीय ब्यापारी घरबाट बाहिर निस्किदा सुनका ब्रेसलेट, नेकलेस, औंठीलगायत गहना लगाउँछन्। समाचारमै कसैले चाँदीको मास्क बनाएर लगाएको थाहा पाएपछि उनले पनि सुनको मास्क बनाउन दिएका हुन्। ‘अहिले मान्छेहरू मसँग सेल्फी खिच्ने भन्छन्,’ उनले भने,’बजार जाँदा सुनको मास्क लगाएको देखेर उनीहरू अचम्मित हुन्छन्।’
भारतले अहिले सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ। भारतमा आइतबारसम्म ६ लाख ७५ हजार बढी संक्रमित छन् भने १९ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन्।